February 2020 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Axmad	 Feb 29, 2020 0
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 06-07-1441…
Dhageystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Maanta waa sabti, taariikhda hijriguna waxay ku beegan…
Magaalooyinka Guriceel iyo Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud waxaa ka dhacay dagaallo culus oo dhexmaray ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa kooxaha Suufiyada ee lagala wareegay maamulkii magaalooyinkaas. Dhinacyada is haya oo…
Duqeyn Kuunyo ka dhacday oo dad ay ku dhaawacmeen.
Axmad	 Feb 28, 2020 0
Diyaarad kuwa duuliya la'aanta ah oo ay leedahay dowladda Maraykanka ayaa maanta galinkii danbe gantaal ku dhufatay guri ku yaalla deegaanka kuunyo Barrow oo katirsan gobalka shabeelaha hoose. duqeynta ayaa gaysatay qasaaro soo gaaray…
Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 04-07-1441
Axmad	 Feb 28, 2020 1
Dhageyso Barnaamijka Diiradda Jimcaha Oo Lagu Falanqeeyay Halista Diineed Ee Ay Wajahayaan…
Dhageystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Maanta waa jimco, taariikhda hijriguna waxay ku beegan…
Axmad	 Feb 27, 2020 0
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. taariikhdu waxay ku beegan tahay 03 08 1441 oo…